Ewubere ụlọ mbụ nke igwe anaghị agba nchara n'ime awa iri abụọ na asatọ iji wuo ala 11, yana ndụ ọrụ ruru otu puku afọ - China Foshan Hermes Steel
E wuru ụlọ igwe anaghị agba nchara mbụ n'ime awa iri abụọ na asatọ iji wuo ala iri na otu, nke ndụ ya ga -adịru otu puku afọ
E kpughere ọrụ ụlọ obibi nke nwere mpaghara puku square 3,000 na ala 11th n'ime awa 28 na Changsha na 16th. Ọ bụ "ọrụ" nke Broad Buildable Technology Co., Ltd., onye enyemaka nke Hunan Broad Technology Group, nke akpọrọ "Living Building", ọ bụkwa ụlọ nchara mbụ nke ụwa.
Usoro ihe owuwu nke ụlọ obibi a dị ka ịrụ ụgbọ ala, na -eji ụzọ ụlọ ọrụ eme ihe iji gbanwee usoro iwu ọdịnala. Otu onye ọrụ nọ ebe ahụ gwara ndị nta akụkọ na ndụ ọrụ ụlọ a nwere ike iru puku afọ.
Banyere ihe kpatara mmepe nke "ụlọ ndị dị ndụ", Zhang Yue, onye isi oche na onye isi Broad Group, kwuru na ihe nchara nwere ike dochie ụlọ ọdịnala iji guzogide ala ọma jijiji. Ihe mkpali nke abụọ bụ ịchekwa ume na ikpo ụlọ ọkụ nke ọma.
“Ụlọ a dị ndụ” na -eji mbụ “igwe anaghị agba nchara isi” nke Yuanda. Ụlọ ahụ niile anaghị eji kredit, ọ bụkwa ụlọ ọrụ mere 100%. Ntinye saịtị ahụ dị oke nfe. A na-ebuga ya na igbe dị mita 40, enwere ike ibufe ya n'akụkụ ụwa niile na-enweghị mgbochi na ọnụ ala. N'oge ọrịa 2020, ụdị South Korea nke "ụlọ ọgwụ Huoshenshan" jiri ụlọ isi ụlọ nrụpụta ụdị igwe anaghị agba nchara.
"A na -emepụta ya site na ụzọ ụlọ ọrụ ma nwee nchekwa dị oke elu. O nwere njirimara nke igwe anaghị agba nchara, mkpuchi ọkụ dị elu, teknụzụ miri emi, na ọnụ ala." Zhang Yue kwuru na site n'iwu igwe anaghị agba nchara, ọ nwere ike gbanwee mgbasa ụlọ n'ime iri afọ ole na ole gara aga. Enwere ike ịfefe ihe ịtụnanya nke akụnụba mmadụ ruo ọtụtụ puku afọ. O mere ka a mara na ụlọ ndị dị ndụ na -agbanwe agbanwe nke ukwuu n'ụdị ụlọ, ụdị otu, ụdị ọnụ ụlọ, na mgbakwunye na mwepụ ala. Enwere ike iji ha rụọ nnukwu ụlọ okomoko, ụlọ nkwari akụ kpakpando ise, skyscrapers, na ụlọ dị ọnụ ala maka ọha.
50% nke ikuku anwuru ọkụ nke ụwa sitere na ụlọ. Ọ bụrụ na anyị belata ike ọkụ site na 80 ruo 90% na ụlọ, ọ ga -abụ 40% nke ikuku carbon n'ụwa niile n'ọdịnihu. "Nke a bụ nnukwu ohere maka mbelata carbon." Zhang Yue kpughere na "ụlọ dị ndụ" na -anabata mkpuchi siri ike, ọtụtụ windo iko, yana mgbake ikuku ọkụ, nke nwere ike belata carbon site na 80% ruo 90% ma e jiri ya tụnyere ụlọ ndị a na -emebu. Enwere ike ịkọwa ya dịka locomotive 'carbon neutral' nke ụwa.
N'otu ụbọchị ahụ, enwekwara ogbako echiche Huolou Technology. Onye bụbu onye odeakwụkwọ UN bụ Ban Ki-Moon kwuru n'okwu isi okwu na vidiyo na ogbako ahụ na ọ nweghị ụzọ ọzọ a ga-esi edozi nsogbu mgbanwe ihu igwe na-abụghị ikuku ikuku efu. Nnukwu ndị na -ebunye carbon dị ka United States, China, Japan, South Korea, na mba ndị ọzọ dị na Europe ekwuputala na 2050 ma ọ bụ 2060 ga -abụ afọ ebumnuche maka ikuku efu efu. Ebumnuche Millennium Architecture nke Broad Living Building setịpụrụ nwere njikọ chiri anya na ebumnuche 11 nke United Nations Sustainable Development Goals, ya bụ "obodo na obodo na -adigide".
Ndị ọkachamara n'ihe owuwu ihe owuwu kwuru na agbanyeghị mma ụlọ dị ndụ, ọnụ ahịa ya dị ala karịa nke ụlọ ọdịnala. Teknụzụ “ụlọ dị ndụ” nke ụlọ ọrụ China nwere nnukwu ike ịnwe ahịa ụwa.
Ihe dị n'elu bụ ọdịnaya nke "Ihe owuwu ụlọ mbụ nke igwe anaghị agba nchara nke ụwa na -egosi ọsọ China, ala 11 wuru n'ime awa 28" nke ọwa akụkọ ihe owuwu wetara gị. Ọwa akụkọ ihe owuwu ga -aga n'ihu na -etinye anya na akụkọ ndị ọzọ na -ekpo ọkụ. Mmadụ Bịa soro anyị ma gee ntị na owuwu ahụ. Akụkọ ụlọ ọrụ na -ekpo ọkụ ~